ဘက်ထရီကို Apple Watch တွင်သိမ်းပါ Gadget သတင်း
El Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်မြင့်မားမှုနှင့်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူအများစုကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်ကြယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ Apple ၏စမတ်နာရီတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့သည့်သုံးစွဲသူ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိသည်သူတို့ဝယ်ယူခြင်းကိုကျေနပ်ကြသည်။
သို့သော် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ဤအမျိုးအစားရှိပစ္စည်းအားလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများကိုမဖြစ်စေခဲ့ပါ သိပ်မကြာသေးခင်ကသူတို့ကစျေးကွက်ကိုထိခဲ့တယ်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်သော်လည်းမည်သူမဆိုနှစ်သက်သည်နှင့်မလုံလောက်ပါ။ ကိစ္စအားလုံးနီးပါးတွင်အားသွင်းရန်လိုသည်။
ထို့အပြင်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် Apple Watch ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်၎င်းကိုတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်အထိဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ယနေ့တွင်သင်၏ Apple Watch တွင်ဘက်ထရီကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အချက် ၁၀ ချက်ကိုဤစာရင်းပြုစုချင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အကြီးအကျယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်တိုးချဲ့။
သင့်မှာ Apple စမတ်နာရီရှိမယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီကတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားရင်ဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်ထားတာကြာရှည်မခံဘူးဆိုရင်အောက်မှာတွေ့ရတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကတချို့ကိုသုံးလိုက်ရင်မင်းရဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့သင့်စက်ပစ္စည်းပြthoseနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
2 မကြာခဏ Apple Watch ကို Restart လုပ်ပါ
3 မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application များကိုသာတပ်ဆင်ပါ
4 သင်အလွန်အကျွံလောင်သည်ဟုသင်ယူဆသော application များကိုရပ်တန့်ပါ
5 အနက်ရောင် WatchFace ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးမှောင်မိုက်တဲ့အရောင်ကိုဝတ်ဆင်ပါ
6 Mickey ကတော်တော်လှပေမယ့်သူကဒရမ်တွေစားတယ်
7 "လက်ကောက်ဝတ်မြှင့်ခြင်း" option ကိုပိတ်ထားပါ
8 "Do Not Disturb" mode ကိုသုံးပါ
10 ပါဝါချွေတာ mode ကိုသက်ဝင်
စမတ်နာရီများသည်များစွာသောအရာတို့တွင်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းမှသတိပေးချက်များကိုချက်ချင်းလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်ဘက်ထရီများစွာလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် smartwatch ပေါ်တွင် application များစွာရှိသည်ဆိုပါက ၄ င်းတို့ကိုအကြောင်းကြားရန်မဟုတ်ပါ။
WhatsApp, Telegram, Twitter (သို့) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တို့သည်သင်အသိပေးချက်များရရှိနိုင်သည့် application များစွာထဲမှအချို့သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားစာရသည့်အခါတိုင်း၊ Apple Watch မျက်နှာပြင်မီးထလာပြီး Bluetooth ကိုသုံးသည်၊ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။
မကြာခဏ Apple Watch ကို Restart လုပ်ပါ
နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ပြmayနာများစွာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပြုလေ့ရှိသည့်အရာဖြစ်သည်အလွန်အကျွံဘက်ထရီသုံးစွဲမှု၏အပါအဝင်။ Apple Watch မှာဒီလိုပဲဖြစ်သွားပြီးစက်ရဲ့ restart ကပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
ပြီးတော့သင် Smartwatch ကို restart လုပ်လိုက်ရင်တောင်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလည်ပတ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်မှားယွင်းစွာအလုပ်လုပ်နေပြီးဥပမာအားဖြင့်လိုအပ်သည်ထက်ဘက်ထရီကိုဖြုန်းတီးပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။
သင့်တွင် Apple Watch ရှိပါက၎င်းကိုမကြာခဏပြန်ဖွင့်ပါ၊ ၎င်းသည်ဘက်ထရီသို့မဟုတ်အခြားအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သောမသက်မသာဖြစ်သောပြproblemနာမှသင့်ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်အတွက်သင်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူနှင့်ဘေးဘက်ခလုတ်ကိုဖန်သားပြင်မှေးမှိန်သွားသည်အထိ နှိပ်၍ ဖိကိုင်ထားရမည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application များကိုသာတပ်ဆင်ပါ
စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်စမတ်နာရီများ၌ application အမြောက်အများကိုတပ်ဆင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းကိုနောက်မှသာမန်အားဖြင့်အသုံးပြုလေ့မရှိဘဲ၎င်းတို့မှမည်သည့်အားသာချက်မှမရှိဘဲထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ ဤအပလီကေးရှင်းများသည်အရင်းအမြစ်များကိုဖယ်ရှားပြီးဘက်ထရီကိုဖြုန်းတီးခြင်း၊ နောက်ကွယ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာဘက်ထရီနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုချွေတာရန်အတွက် Apple Watch တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application များကိုသာတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ Application များကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် applications များပိုမိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်မလွယ်ကူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ၎င်းနှင့်အတူသင်သည်သင်၏ device ၏ဘက်ထရီကိုအားရစေလိမ့်မည်။ ဒီအကြံဥာဏ်ကိုသင့်ရဲ့ iPhone နဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်စက်ကိရိယာအတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်အလွန်အကျွံလောင်သည်ဟုသင်ယူဆသော application များကိုရပ်တန့်ပါ
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ဘက်ထရီအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပုံမှန်မဟုတ်ပါ လျှောက်လွှာကိုအသစ်ပြောင်းပြီးနောက်၎င်းသည်ဘက်ထရီအလွန်အကျွံသုံးစွဲသည်ဟုသင်သတိပြုမိပါက၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ဘက်ထရီစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်။ သင်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးအခြားတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးရန်ပင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကိုပုံမှန်မထားဘူးဆိုတာသတိရပါ။ အထီးကျန်ကိစ္စများတွင်သာလျှင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပမာဏကြီးမားသောဆေးများဖြင့်စားသုံးသည်။
အနက်ရောင် WatchFace ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးမှောင်မိုက်တဲ့အရောင်ကိုဝတ်ဆင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple Watch ၏ဖန်သားပြင်သည် OLED ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှောင်မိုက်သောသူများထက်အလင်းအရောင်များကိုဖော်ပြရန်စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်သည့်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိရိယာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့လိုပါက သင်အနက်ရောင် watchface သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမှောင်မိုက်ထားသင့်ပါတယ်.
အကယ်၍ သင်၏ Apple စမတ်နာရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဂရုမစိုက်ပါကသင်၏ဘက်ထရီအားစောင့်ကြည့်ရန်မေ့လျော့ပြီးသင်၏စမတ်နာရီကိုအားသွင်းရန်မြင်နိုင်သောနေရာတွင်ထားရှိရန်ပင်မေ့နေလျှင်ပင်သင်လိုချင်သည့်နာရီမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထည့်။ ပျော်မွေ့ပါ။
စျေးကွက်ရှိစမတ်နာရီအများစုကသင့်အားကာတွန်းနောက်ခံများကိုနာရီမျက်နှာအဖြစ်နေရာချရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤကာတွန်းနောက်ခံများသည်အများအားဖြင့်ဘက်ထရီများစွာကိုစားသုံးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိရိယာ၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့လိုပါက၎င်းတို့ကိုပယ်ဖျက်ရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။.
သင်၏ Apple Watch ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုရပ်တန့်ရန် iPhone ရှိ Apple Watch အက်ပလီကေးရှင်းမှ ၀ င်ရောက်မှုကိုယေဘူယျရွေးစရာသို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ ထို့နောက်သင်က Accessuce ရှိရာ "Reduce Movement" နှင့် "Reduce Transparencies" ကိုရွေးပါ။ ။
"လက်ကောက်ဝတ်မြှင့်ခြင်း" option ကိုပိတ်ထားပါ
Apple Watch ကကျွန်တော်တို့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းမှာမျက်နှာပြင်ဖွင့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာကနာရီကိုကြည့်ဖို့ငါတို့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းမကြည့်ခင်သူ့ဖန်သားပြင်ကဖွင့်တယ်၊ ပြနာကဒါပဲ ကျနော်တို့လက်ကောက်ဝတ်ရုတ်သိမ်းသည့်အခါတိုင်းဘက်ထရီဖြုန်းတီးမှုနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ပေါ်လာသမျှကိုလုပ်ရန်.
သင်၏ဘက်ထရီသည်အချည်းနှီးဖြစ်သွားပုံကိုမမြင်တွေ့လိုပါက“ raising the wrist” option ကိုပိတ်ထားပါ။ သင့်ရဲ့ Apple Watch ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဘယ်လောက်ကြာရှည်သလဲဆိုတာကိုသင်ချက်ချင်းသတိပြုမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့်သင့်နာရီရဲ့ဖန်သားပြင်က၎င်းကိုရုတ်သိမ်းရုံဖြင့်မလင်းနိုင်ရင်
"Do Not Disturb" mode ကိုသုံးပါ
El Apple Watch "Do Not Disturb" mode iPhone ၌ရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်စက်ပစ္စည်းအားပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးချက်တစ်ခုရသည့်အခါတိုင်းမျက်နှာပြင်မလင်းလာပါကရှင်းလင်းသောဘက်ထရီချွေတာခြင်းဖြင့်အသံမြည်မည်မဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ Apple Watch သည်ဘက်ထရီစွမ်းအင်အားနည်းနေပါကဤစနစ်ကိုဖွင့်ခြင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
လေယာဉ်ပျံ mode သည် Apple Watch ကိုပုံမှန်နာရီကဲ့သို့ထားခဲ့ပြီး WiFi သို့မဟုတ် Bluetooh လိုအပ်သောမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှမလုပ်နိုင်ပါ။။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်နာရီ၌အရာအချို့ကိုဆက်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤ mode ကိုမဖွင့်ပါကဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ပါဝါချွေတာ mode ကိုသက်ဝင်
ပို။ ပို။ devices များတစ် ဦး ထည့်သွင်း ပါဝါချွေတာခြင်းမုဒ်နှင့် Apple Watch ၏သင်တန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကကမ်းလှမ်း။ ဤ mode သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘက်ထရီနည်းပါးပြီးစမတ်နာရီသည်ဤ mode ကိုသက် ၀ င်စေမည်ဆိုပါကမည်သည့်နာရီမျှမဆိုပါ။
ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါတွေက Apple Watch မှာဘက်ထရီကိုချွေတာနိုင်တဲ့အချက် ၁၀ ချက်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျန်ရှိသည့်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီမှသင်၏စမတ်နာရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့ရန်သင်အသုံးပြုသောအရာတို့ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » စမတ်နာရီ » သင်၏ Apple Watch တွင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသက်သာစေမည့်နည်းလမ်း ၁၀ ချက်
Windows 10 ကိုသူလျှိုတွေဘယ်လိုတားဆီးမလဲ